Xubo uu magacaabay Gudoomiye Jawaari oo la kulmay Madaxweyne farmaajo. – Hornafrik Media Network
Hornafrik-Xubo ka kooban 7 xildhjinban oo uu maanta magacaabay Gudoomiyaha Golaha shacabka e Baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shiikh Cusmaan jawaari kana shaqeynyaya xalinta khilaafka dheeraaday ayaa waxaa ay kulankii ugu horeeyay la qaateen madaxweynaha soomaaliya maxamed candullahi Farmaajo.
Cqaadir cosoble calii aamino xasan cali axmed macalin fiqi fowsiyo maxamed iyo fowsiyo sheikh iyo xasan oo ah gudiga uu jawaari manta magacaabay ayaa madaxweynaha waxa aay kala hadleen arinka loo xilsaaray ee ah in ay ka shaqeeyaan xalinta khilaafka golaha shacabka jira .
Xildhibaanada kualnka ka qeybgalay qaar oo inoo waramay ayaa shegay in ay madaxweynaha isla garteen in xal laga gaaro khilaafka mudada dheer jira , dhankoodana ay madaxweynaha u sheegen in lagama maarman tahay labo qodob
Waa kan hore e in la gaaro xal deg deg ah waa kanlabaad e hadii xal aan codeynta mooshinka ahayn la waayo in la qabto codeyn ay kor joogto caalami ah xaadirsanyihiin loona maro sida ku qoran xeer hoosaadka ah oo ah in loo codeeyo qaab qarsoodi ah.
Xildhibaanada Hornafrik u waramay ayaa sidoo kale sheegay in madaxweynaha ayaa caawa kula balansanyihiin kulan kale .
Sidoo kale Gudiga jawaari uu soo magaacaacay ayaa waxaa ay sheegeen in in ay kulamo la qaadan doonaan ildhibaanada mooshinka ka keenay gudoomiyaha inkasta oo wali Gudomiye ku xigeenka 1aad Muudey uusan wali ku dhawaaqin xubnaha dhankoodsa wadahadalka u matalaya.
Sarkaal ka Tirsan Nabad Sugida Soomaaliya oo xalay la dilay.